Oleg Soloviev အနုပညာရှင်
ကြှနျုပျကအနုပညာသမားဖွစျပါတယျ. စကားလုံးများ, ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုပြောနိုင်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းဂုဏ်ယူစွာသူကို. ဂရိတ် Eugene Delacroix တစ်ချိန်ကဆိုပါတယ်: "ပန်းချီ – neboltlivoe အနုပညာ, နှင့်ဤ "က၎င်း၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါသည်. ဒါကရုပ်ပုံငါ့ကိုအကြောင်းကိုပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်, မည်သည့်ပုံပြင်များထက်. သင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုရှာပါ - အလွန်ခက်ခဲသည်. ဒါပေမယ့်အလုပ်ကယ့်ကိုဖန်တီးသူသာနှစ်သက်သည့်အခါ, ဒါပေမယ့်တခြားသူတွေလည်း - သူကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုထောက်ပံ့နှငျ့ခှနျအားကိုပေးတော်မူ၏ရဲ့.
ငါ၏အမှုတို့ကိုငါ့မျက်စိနှင့်ငါ့ခံစားချက်တွေကိုမှတဆင့်ကမ္ဘာကြီးကိုပြသနိုင်ဖို့ဆန္ဒနှင့်ပြည့်စုံနေကြတယ်. မဟုတ်လူတိုင်းအနုပညာရှင် Oleg Solovyov ၏ရူပါရုံကိုသဘောတူပါလိမ့်မယ်, ကမ်ဘာပျေါတှငျလူများ၏ပေမယ့်အများကြီး, သူ Kandinsky ခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ်, ပီကာဆိုသို့မဟုတ် Chagall စရိုက်ပုံပေါ်. ထိုအခါတကယ်တော့ရှိနေသော်လည်း, ကျွန်တော်တစ်ဦးမြင့်မားနည်းပညာဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျကြောင်း, ပတ္တူနှင့်စက္ကူပေါ်တွင်ပန်းချီအနုပညာသည်၎င်း၏ကျက်သရေကိုမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ.
ပို. ပို. လူများအနုပညာရှင်ကနေပန်းချီကားအမိန့်ဆုံးဖြတ်. ဒါပေမဲ့, ပန်းချီအတွက်အများကြီးမဟုတ်နားလည်မှု, စတိုင်များနှင့်ပစ္စည်းများကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ. တစ်ခုချင်းစီကိုအနုပညာရှင်အလုပ်၏သူ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းရှိပါတယ်, အရောင်ရှာရန်၎င်းတို့၏လမ်း, ပုံစံနှင့်စတိုင်. ငါ၏အမှု - ခေတ်ပြိုင်အနုပညာ. ထိုအပေမဲ့ပန်းချီကား - ကမ္ဘာပေါ်မှာရှေးဟောင်းအနုပညာ, ငါကပိုပေါ့ပ်အနုပညာဖို့ပိုနှစ်သက်, Avant-garde.
အဆိုပါ Avant-garde ၏တည်ထောင်သူ Wassily Kandinsky အားဖြင့်စဉ်းစားသည်. အဘယ်အရာကိုမှတျသားဖှယျဖြစ်ပါတယ်အနုပညာအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်?
အသစ်သောပုံစံများအဘို့အရှာဖွေရေး, ကြိုဆိုဧည့်, စတိုင်များ, ပန်းချီ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာထောက်ခံမှုဆန်းသစ်တီထွင်မှု.
ဂန္နှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအသိအမှတ်ပြု၏ငြင်းပယ်, တော်လှန်ရေး. Avant-garde အနုပညာအပြည့်အဝတော်လှန်ရေး၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူ permeated ဖြစ်ပါတယ်.
ဇာတ်ကောင်ဓာတ်ပုံများကို - အငြင်းပွားဖွယ်, စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါး, ရှုပ်ထွေးသော.
တဦးတည်းရုပ်ပုံရန်တုံ့ပြန်မှုအတော်လေးဝင်ရိုးစွန်းဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေလစျြလြူရှုမည်သူမဆိုစွန့်ခွာမည်မဟုတ်. ကမ္ဘာကြီးအနုပညာဘဏ္ဍာတိုက်တွင်ထည့်သွင်းအကျင့်၏အတော်များများက. အဆိုပါ Avant-garde ၏အကျော်ကြားဆုံးသခင် - ကျနေတဲ့, မာ့ခ် Chagall, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ Mondrian, Pablo Picasso နှင့်အခြား.
ပေါ့ပ်အနုပညာအတော်လေးမကြာသေးမီဖြစ်ပါသည်, အလယ်မှာ 20 ရာစု. ထိုအခါ Avant-garde ၏အကိုင်းအခက်တစ်ဦးအဖြစ်, ဒါဟာပေါ်ပြူလာယဉ်ကျေးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုထင်ဟပ်. ဒါကပေါ့ပ်အနုပညာထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေနှင့် kinetic အနုပညာအဖြစ်ဒေသများရှိတွန်းအားပေး၏, စိတ္တဇ expressionism, Neo-Pop ဂီတအနုပညာ.
ဒါကစတိုင်အနုပညာရှင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်, ပတ်လည် unvarnished ဘဝကိုပြခြင်းငှါရှာကြံ, ရီစရာခေတ်သစ် vulgar အားမနာ, စျြလြူရှုမှုနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတခြားဘေး. ကျွန်မအနုပညာကမ္ဘာပေါ်မှာ၌ဤတုန်လှုပ်ဖွယ်ထူးခြားသောစတိုင်လ်ဒါအနီးကပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
ငါတော်တော်များများ penmanship ချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစား, ထို့ကြောင့်မိမိစတိုင် created, ကိုယ်ပိုင်အနုပညာလက်ရေး. ပန်းချီကားများကိုမကြာခဏရူပကတှေနှငျ့ပွညျ့စုံနေကြတယ်, ဥပစာစကား, လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်လြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြ.
မည်သည့်အတွင်းပိုင်းမှထူးခြားမှုကိုထည့်သွင်းဖို့တစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လမ်း - မှာပန်းချီ, ၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအားလျော့မပေးနေစဉ်. သင်တန်း, ငါပြီးပြီရုပ်ပုံဝယ်နိုင်ပါ. အမှတ်, အတိအကျငါ့ကိုသင်တို့၏အကြံအစည်ပြောပြ, အနာဂတ်မှာပန်းချီကားများအဘို့အရူပါရုံကို, ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်.
client ကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦးအနေနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောဆုကြေးဇူးကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက, အဆက်အသွယ် - အချောအလုပ်အကြားတစ်ဦးသင့်လျော် option ကိုမိသားစုနှင့်တွေ့ရှိရ. မည်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုအမိန့်ဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာအချိန်ပေါ်ပြီးစီးလိမ့်မည်.
လက်ဆောင်တစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေမှာပုံတူဖြစ်သည်. ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ပုံမှဓာတ်ပုံ. ပန်းချီဆရာတစ်ဦးပုံတူအမိန့် – ပစ္စုပ္ပန်ကိုမဆိုအားလပ်ရက်များအတွက်ထူးခြားသောဖြစ်ပါသည်, မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်. တစ်ဦးဓာတ်ပုံရိုက်ထံမှပတ္တူအပေါ်စနစ်တကျကွပ်မျက်ခံရပန်းချီကားလက်ဆောင်အနိုင်ရကျေနပ်ပါလိမ့်မည်, မိန်းကလေးတစ်ဦးအဖြစ်, နှင့်နှစ်များတွင်ယောက်ျား. အမိန့်မှဓာတ်ပုံများကို၏ရုပ်ပုံများ - ဤလုပ်ငန်းကိုလူများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်, အလွန်အလုပ်များနေကြသည်, သူတို့အနုပညာရှင်တစ်ဦး၏ရှေ့မှောက်၌လောကအတွက်မရှိအချိန်ရှိသည်. သေချာပါစေ - ငါအားလုံးယခင်ကအသေးစိတ်ကိုသဘောတူညီခဲ့အကောင့်သို့ယူပါလိမ့်မယ်: tonality, စက်မှုပညာ, စတိုင်.
ဂရပ်ဖစ် - ဆိုအနုပညာရှင်၏လုပျငနျး၏အခြေခံ. ငါကတ်ထူပြားသို့မဟုတ်မူပန်းချီစာရွက်ပေါ်တွင်ရွေးချယ်ခေါင်းစဉ်အပေါ်ဆွဲ Order နိုင်ပါတယ်. ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်, ဒါကြောင့်ဖောက်သည်အပေါ်ရေတွက်လို့ရပါတယ်: ကုမ္ပဏီလိုဂိုဒီဇိုင်း, တက်တူးထိုးပုံကြမ်း, ပုံဆွဲများနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်.
အမိန့်မှရေနံပန်းချီကားများ - တစ်ဇိမ်ခံအတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်. အမှန်, ငါသည်သင်တို့ကိုမပူဇော်နိုင်ပါတယ်.
နပေုံ - တမူထူးခြားတဲ့နှင့်ထူးခြားသောဓာတ်ပုံများကို, အဖြစ်မြို့ကြီးများသူတို့ကိုယ်သူတို့. ပြီးခဲ့သည့်ရာစုမှာတော့သူတို့ဥရောပအတွက်အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ကြ, ယခုကျနော်တို့နိုင်ငံမှာနေတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုသို့သောပုံရိပ်တွေစွယ်စုံများမှာ: မည်သည့်အခန်းတွင်ကြည့်ဖို့သင့်လျော်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. တစ်ခုတည်းသော, အဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်သင့်တယ် - စတိုင်.
စိတ္တဇပန်းချီစွမ်းအင်နှင့်စကားရပ်နှင့်ပြည့်ဝ၏. ဒါဟာ၎င်း၏ဖောက်သည်မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲအာရုံစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်. ဒီစတိုင်ပန်းချီကားများအလွန်လူကြိုက်များ. စိတ္တဇပန်းချီသို့မဟုတ်ပါ pop အနုပညာရဲ့ style အတွက်ပတ္တူပေါ်တွင်ရေနံပန်းချီမဆိုအခန်းတို့သည်ကြီးစွာသောဝဲ add ပါလိမ့်မယ်.
အရွက်ရဲ့အရွယ်အစား - ဆိုပုံသဏ္ဍာန်၏ဖောက်သည်ရဲ့ရွေးချယ်မှု.
style - ဖောက်သည်ကရွေးချယ်အဖြစ်.
ပစ္စည်း - ပတ္တူ, စက္ဏူထူ, စက္ကူ, Kraft.
ပစ္စည်းကရိယာ: ဆီ, acrylic, မင်, gouache, ဂရပ်ဖစ်, ရောထွေးမီဒီယာ, ဂျယ်လ်ကလောင်, etc.
တောငျးဆိုခကျြအပျေါ, ငါအီလက်ထရောနစ်ပုံစံထဲသို့ image ကိုဘာသာပြန်ဆိုလို့ရပါတယ်.
အတွင်းပိုင်းအလှဆင်ဘို့ပုံကိုရွေးချယ်ပါ - အတူတူပင်ခက်ခဲအလုပ်တခုကို, အဖြစ်က၎င်း၏သရေကျ. အကောင့်သို့အသေးစိတ်ကိုအများကြီးယူသင့်တယ်: အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ, လ်တာ, အရောင်များ, အခန်း၏အရွယ်အစားနှင့်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်. ရုရှားတွင်အတွင်းပိုင်းများအတွက်ပန်းချီကားများဝယ်ပါစတိုင်တစ်ခုအခြို့သောအသိပညာနှင့်အသိလိုအပ်ပါတယ်. မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်တော်မူထည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစု၌မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်, လူ့အရသာအကြောင်းကိုဟောပြောပွဲတွေအများကြီး.
အကြှနျုပျ၏ပန်းချီကားများ, ကွဲပြားခြားနားသောနည်းစနစ်များနှင့်ပုံဆွဲနည်းစနစ်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေ, ရှိအောင်နှစ်သက်နှင့်အထင်ကြီးကြည့်ရှုမည်နှင့်ဆက်ဆက်နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ရှင်တွေကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်, နှင့်ပရိသတ်. အတွင်းပိုင်းအဘို့အခေတ်ပြိုင်ပန်းချီကားကိုဝယ် - ကအနုပညာရှင်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဝယ်ဖို့ဆိုလိုတယ်, နှင့်ပုံတိုင်း, စက်မှုပညာရှင်များ, ချက်ချင်းမြို့တော်ဖြစ်လာ.
ငါ၏အမှုတစ်ခုချင်းစီ - ဤကျွမ်းကျင်ပိုင်၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်, သင်၏ရွေးချယ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်သီးသန့်, အရာသာရှိပါလိမ့်မယ်.
သေးသေးလေး မှ 5000 RUR
ကျစ်လျစ်သေးသွယ် မှ 10000 RUR
ဗဟို မှ 15000 RUR
သာ. ကြီး မှ 20000 RUR
1996-2000 – သူက Chelyabinsk အနုပညာကောလိပ်မှဘွဲ့, ဒီဇိုင်းဌာန
2000-2007 – သူကအနုပညာနဲ့စက်မှုအကယ်ဒမီမှကျောင်းဆင်း. siskin (ယင်ကောင်), ကုလားထိုင်ဆက်သွယ်ရေးဒီဇိုင်း